Ubunjineli beGeo-Twin neGeo Magazine-uHlelo lweSibini-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ubunjineli beGeo-TwinGeo Magazine-uHlelo lweSibini
Geospatial - GISZobunjineliegeomates My
Besihleli umzuzu onomdla wotshintsho lwedijithali. Kuwo wonke uqeqesho, utshintsho luya ngaphaya kokulahlwa ngokulula kwephepha ukwenza iinkqubo zibe lula ekukhangekeni kokusebenza kakuhle kunye neziphumo ezingcono. Icandelo lokwakha ngumzekelo onomdla, oqhutywa ziinkuthazo zangoko ezinje nge-Intanethi yeZinto kunye nezixeko zedijithali, kumda wokuphinda uzivuselele ngokwendlela ye-BIM evumela oko.
Ukumiselwa komgangatho we-BIM ukuya kwinqanaba lesi-3 kuyahambelana nengqondo yamaDijithali amawele, kangangokuba bekungekho nzima kwiinkampani ezinje ngeMicrosoft ukufumana indawo elungileyo kwintengiso ebibonakala ngathi yeyonjineli kunye nabayili bezakhiwo. Kwimeko yam, ndivela kwisizukulwana esabona i-CAD ifika njengesisombululo kumzobo oqhelekileyo kwaye kwakunzima kum ukuba ndenze imodeli ye-3D kuba ekuqaleni imizobo yam yesandla yayibonakala inomtsalane kunokunikezela okuyindinisa. Kwaye nangona sikholelwa ukuba le nto siyenzayo ngoku ngeSakhiwo seRobhothi, i-AecoSIM okanye iSynchro yeyona ilungileyo, ukujonga emva kwiminyaka engama-25 eyadlulayo akukho nto iyenzileyo ngaphandle kokundenza ndiqiniseke ukuba sikwiqondo elinye lokujika kulawulo oludibeneyo lomxholo.
... kwindlela yobunjineli.
Kanye ngoku njengoko iMigaqo-Gemini ibonakala ngathi itsala olunye uhlobo kwindlela yokuphakama kwamanqanaba e-BIM, iphinda ivuselele ingcinga endala ebizwa ngokuba ngamaDijithali Twins apho iinkampani ezinkulu zolu shishino ziluyela enguqukweni lwesine lweshishini; kunye nenjongo yokuqhubeka nomxholo wokuzivelela kobunjineli be-Geo, njengebali elingaphezulu lesikolo sigqibe kwelokuba i-BIM ibe nokuqiqa kunye nokubaluleka kwayo.
Sincedisa uhlelo kunye nemizekelo yezinto ezintsha kwibala lobunjineli be-Geo ngesoftware kunye nabanikezeli beenkonzo. Ezi zifundo zilandelayo kunye namanqaku ayabonakala:
Ulawulo lwamaziko anobulumko, ipaki yesayensi yaseHong Kong isebenzisa umxholo wedijithali.
Ukuhlolwa okuzimeleyo kweendlela kunye nolwakhiwo lolungelelwaniso kusetyenziswa iDrone Harmony.
UChristine Byrn usixelela ngeSixeko seDigitally Advanced ngokubhekisele kulwazi oluthembekileyo xa kwaye apho kufanelekile.
I-LandVviewer, kunye nemisebenzi yayo yokufumana utshintsho kwi-browser.
Ngokuphathelele kudliwanondlebe, iphephabhuku libandakanya ukusebenzisana nabadali beSynchro, i-UAVOS kunye neyokuqala kaJosé Luis del Moral neprojekthi yakhe yePrometheus yobukrelekrele bokusetyenziswa kwezinto kwisiseko somthetho.
... kwindlela ye-GEO.
Ngakolunye uhlangothi, ukuyibona kuphuma kwisikimu sayo sokuhlola, kunye nokucinga malunga nokujongana nomceli mngeni wokudibanisa umgangatho we-LADM kunye ne-InfraXML kungaphezulu kokwanelisa. Ukubekwa emgangathweni ekugqibeleni kungene njengomsonto oqhelekileyo phakathi kwecandelo labucala kunye nomthombo ovulekileyo, abanye njengabadlali abaphambili, abanye njengokurhoxa ukuba izinto ziya kwenzeka nazo okanye ngaphandle kwazo. Okokugqibela inzuzo ngamava aphumeleleyo; Ke ngoko, kwicandelo le-geospatial kunye nokuqhubekeka nomgca woBhaliso loMhlaba, sibandakanye imeko yempumelelo kulawulo lomhlaba.
Ukongeza, iphephabhuku elityetyiswe iividiyo ezifakwe ngaphakathi kunye nekhonkco yokunxibelelana, iqulethe iindaba ezivela kwi-Airbus (COD3D), i-Esri ngokubambisana kwayo ne-Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 kunye ne-M.App) kunye ne-Trimble eneenkonzo zayo zeCatalyst.
Ukugcina ukuzibophelela kwethu ekuboneleleni ngamabali anomdla kumdlalo wobunjineli we-Geo, siyavuya ukukunika uhlelo lwesibini lweMagazini ye-Geo-engineering yeSpanish kunye neTwinGeo yokuthetha isiNgesi.
Funda iTwinGeo- ngesiNgesi
Funda i-Geo -unjineli-NgeSpanish
Omnye unyaka, elinye inqanaba elibalulekileyo, amanye amava angaqhelekanga... Yayiyi-YII2019 kum!
INkomfa ye-15 yeHlabathi ye-gvSIG- usuku loku-1
II-Intlanganiso yasimahla ye-Geomatics, eVenezuela